Nagu saabsan | ZHEJIANG JIAWEI ARTS & CRAFTS Co., Ltd.
Zhejiang Jiawei Arts & Crafts Co., Ltd. waa soo saare iyo dhoofiye ee geedaha dabiiciga ah ee ubaxa ， ubaxyada iyo geedaha. Waxaan deganahay magaalada Dongyang, gobolka Zhejiang, Shiinaha. Waxyaabahayaga ugu waaweeyn waxaa ka mid ah geedaha Artificial Palm, geedaha Ficus, geedaha bambooyinka, geedaha Fiddle, geedaha qumbaha, geedka Bannaanka, geedka Dracaena, dhirta Orchid iyo warshad Monstera iwm.
Waxaa la asaasay 2003, Warshadeennu waxay ku fadhidaa dhul dhan 26000 mitir murabac iyo 400 mitir oo laba jibbaaran. Qaadashada 16 sano, warshaddeenna hadda waxay leedahay in kabadan 200 oo shaqaale iyo kumanaan moodel ah. Shabakada suuq geyntu waxay kordhisay ilaa 40 wadan oo aduunka ah, waxayna si gaar ah ugu ciyaaraysaa AUSTRALIA, UK, GERMANY, FRANCE, POLAND, JANPAN, Mexico, BRAZIL iyo wadamo kale iyo gobolada.
Guusha Jiawei waxay ka timaadaa ma aha oo kaliya alaabada leh tayo wanaagsan, iyo awood xoog leh oo lagu xakameeyo kharashaadka, laakiin sidoo kale sameynta daraasad, hagaajinta iyo raadinta hal abuurnimo. Dhisidda koox naqshadeeye xirfadle ah, iibsashada qalabyo wax soo saar horumarsan iyo dejinta nidaamyo maareyn heer caadi ah ayaa noo xaqiijinaya inaan ilaalino awood tartan awood badan leh iyo soo jiidashada mustaqbalka fog ee sannadaha soo socda.
Sanadka 2018, warshadeena ayaa soo gudubtay Sedex xisaabiyaha. Awoodda wax soo saarka billaha ah ilaa 30 by 40 weelasha HQ.
“Marka hore macaamiilku, kuna saleysan adeegga, Ka faa’iideysiga iyo curinta, Raadso tayo sare” waa tilmaamahayaga iyo mabaadi'dayada. OEM sidoo kale annaga ayaa diyaar ah. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa macaamiisha guriga ka timid iyo dibaddaba si loo sameeyo iskaashi loona abuuro mustaqbal ifaya oo wadajir ah.